राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदुत निक्कीको राजीनामा, बाध्यता कि आवश्यकता ? – Mission Khabar
राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदुत निक्कीको राजीनामा, बाध्यता कि आवश्यकता ?
मिसन खबर २३ आश्विन २०७५, मंगलवार १४:३७
एजेन्सी– राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले राजीनामा दिएकी छिन् । अमेरिकी मन्त्रिपरिषद् सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागिता पाउने हैसियत कि राजदूत निक्कीको आकस्मिक राजीनामालाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
पारिवारिक श्रोतले राजीनामा गरेको पुष्टि गरेका छन् भने उनी र राष्ट्रपति ट्रमबीच ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी समय अनुसार १० बजे भेटघाट हुने बताइएको छ । राजीनामाको कारण र भेट बारे अहिलेसम्म केही खुलेको छैन । यसअघी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदबाट अमेरीका बाहिरिने समयमा मानवअघिकार परिषदलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह थुपार्ने खाल्डोको संज्ञा दिदै राजुत निक्कीले ट्रम्पलाई साथ दिएकी थिइन् । अझ, उनै राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्कीले पाखण्डी र आफ्नै मात्रै सेवामा केन्द्रित निकायले मावन अधिकारलाई मजाक बनाएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
अमेरिकाबाट बाह्य राष्ट्रमा नियुक्त हुने राजदूत मध्य राष्ट्रसंघका राजदूत सबैभन्दा शक्तिशालि मानिन्छन् । जसलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्यको हैसियत दिइएको हुन्छ । अकस्मात आएको यो राजीनामाको प्रभाव कस्तो हुन्छ ? यो आफै खुल्दै जानेछ ।